I-trailer yokuqala yoluhlu lwePhysical ngoku iyafumaneka Ndisuka mac
I-trailer yokuqala yoluhlu lwePhysical ngoku iyafumaneka
Abafana abavela eCupertino bathumele kwitshaneli ye-YouTube itreyila yokuqala yoluhlu olulandelayo oluza kuqala kwi-Apple TV +. Ndiyathetha Ngokwasemzimbeni, uthotho lomdlali weqonga uRose Byrne edlala indima yendima yomfazi wasekhaya okhathazekileyo wama-80s kunye nomhlali waseSan Diego othe wancanca kwi-aerobics craze yeshumi leminyaka njengoko elwa nembambano kuhambo olude. Olu luhlu luza kuqala ngoJuni 18 kwi-Apple TV +.
Umzimba wenziwe nguAnnie Weisman, Waziwa ngomsebenzi wakhe wangaphambili kuthotho Inkwenkwe Enkulu (Malunga neNkwenkwe), ngaphandle kweNdawo (Suburgatory), Ndiziva ndingendawo kwaye ndilahlekile Abafazi baseHouase.
Kwicala esilifumanayo UTonya, uLiza Johnson noStephanie Laing. Ngokwasemzimbeni kuchazwa njengesiqhulo esimnyama seyure-esimnyama esabekwa ngo-80 eSan Diego kwaye silandela uSheila Rubin, umfazi wasekhaya ophethwe kakubi.
Ukuphuma ebumnyameni obabunikelwe bubomi bakhe emva kokutshata, wenza imithambo, kodwa akakhululekanga de afumane indlela yokudibanisa ukuthanda kwakho okutsha kokuzilolonga kunye netekhnoloji yevidiyo evuselelayo ukuqala ishishini eliguqukayo ngokuthe ngcembe ekubeni ligorha yendlela yobufazi yexesha.
Ukukhutshwa okuzayo kwiApple TV +
Ngaphambi kwenkulumbuso yolu ngcelele lutsha, I-Apple icwangciselwe ukukhupha Imuvi Unxweme lweengcongconi Aprili 30, ixesha yesibini thotho Ukufuna intsomi ngoMeyi 7, ixesha yesibini thotho Imijikelo ngoMeyi 14, uthotho Ibali likaLisey ngoJuni 4 kunye nexesha lesibini loluhlu Ikhaya ngaphambi kobumnyama I-11 kaJuni. NgoJulayi 23 ixesha lesibini loluhlu luza kukhutshwa UTed Lasso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-trailer yokuqala yoluhlu lwePhysical ngoku iyafumaneka
I-Apple Music izisa iiHlits kwihlabathi liphela ngeengoma ezingama-25 ezimameleyo kumazwe angaphezu kwekhulu
Iziphumo zezemali ze-Apple kwikota yesibini ka-2021: Epreli 28.